LCCI | Accountancy
by HSH | Sep 12, 2018 | Accountancy, LCCI, LCCI Diploma, LCCI EXAM, LCCI Exam Registration, LCCI Mandalay, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI North Dagon, LCCI Online Learning, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
LCCI December 2018 Exam အတွက် Registration ပေးသွင်းမည့်သူများ 17 September 2018 မှ 2nd October 2018 အတွင်း မိမိတို့သင်တန်းကျောင်းများ ( သို့ ) British Council တို့တွင်သွားရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ** British Council သို့သွားရောက်ပေးသွင်းမည့်သူများသည် မှတ်ပုံတင် ( သို့...
by HSH | Aug 12, 2018 | Accountancy, LCCI, LCCI Diploma, LCCI EXAM, LCCI Mandalay, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI North Dagon, LCCI Online Learning, LCCI Result Slips & Certificates, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
ဘာသာစုံဖြေမလား ခွဲဖြေမလား ?? အလုပ်တဖက်နဲ့ ကျောင်းတဖက်နဲ့ ကြိုးစားသင်ယူကြရလို့ပင်ပန်းကြပါတယ်။ အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျောင်းစာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းနဲ့အများတော့ Challenge ရှိကြပါတယ်။ Game ကစားရင်တောင် တဆင့်ထက်တဆင့်ပိုခက်လာတာကိုက ရအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေတာပါ။...
by HSH | Aug 9, 2018 | Accountancy, LCCI, LCCI EXAM, LCCI Exam 2018, LCCI Mandalay, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI North Dagon, LCCI Online Learning, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
LCCI Exam Registration for November 2018 27 August to 11 September 2018. မိမိတို့သင်တန်းကျောင်းများ ( သို့ ) British Council သို့သွားရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ British Council သို့သွားရောက်ပေးသွင်းမည့်သူများ မှတ်ပုံတင် ( သို့ ) ကျောင်းသားကဒ်...
Exam Fees for June 2018
by HSH | Mar 6, 2018 | Accountancy, LCCI, LCCI EXAM, LCCI Exam 2018, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI Online Learning, LCCI Yangon
June 2018 အတွက် LCCI Exam Fees ပေးသွင်းခြင်းကို March 12 ရက်နေ့မှ March လကုန်အထိ မိမိတို့သင်တန်းကျောင်းများ ( သို့ ) British Council တွင်သွားရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ သင်တန်းတွေမှာတော့ သတ်မှတ်ရက်ထက်စောပြီးနောက်ဆုံးထားလက်ခံလေ့ရှိပါတယ်။...
Exam Fees for April 2018
by HSH | Jan 16, 2018 | Accountancy, LCCI, LCCI Diploma, LCCI EXAM, LCCI Exam 2018, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI Online Learning, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
LCCI April 2018 Exam အတွက် Exam Fees များကို မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းများ ( သို့ ) British Council သို့သွားရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ 15 January 2018 မှ 30 January 2018 နောက်ဆုံးထားပြီးပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အမည် စာလုံးပေါင်း မှတ်ပုံတင်အမှတ် မွေးသက္ကရာဇ် M / F...
Exam Fees for January 2018
by HSH | Oct 11, 2017 | Accountancy, LCCI, LCCI EXAM, LCCI Exam 2018, LCCI Mandalay, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI North Dagon, LCCI Online Learning, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
LCCI Exam Fees For January 2018 can be submitted as from 23rd Oct 2017 to 31st Oct 2017. ASE20091 – Book-keeping Level 1 – 27 USD Level2subjects – 32 USD for each subject ASE20093 – Book-keeping and Accounts Level2– 32 USD ASE20094...
LCCI Exam Fees Sep: 2018